Izinkuni Ezimnyama Ezimnyama Namhlophe, Ukuthungwa Okulula Okuvamile | Umklamo we-Aizhu
Ikhaya / Umklamo wangaphakathi / Izinkuni Ezimnyama Ezimnyama Namhlophe, Ukuthungwa Okulula Okuvamile | Umklamo we-Aizhu
2020 / 10 / 15 UkwahlukanisaUmklamo wangaphakathi 1552 0
I-Aesthetics esebenzayo / I-Alliance Interior Design Alliance
Ubudlelwano phakathi kwabantu nendawo, ukunakwa ngokwengeziwe ekuthuthukisweni kwenani lesikhala.
Leli cala liseNanjing. UMnu Zhou unguchwepheshe we-IT ovame ukudinga ukusebenza isikhathi esengeziwe futhi adinga ukutadisha ngaphezu kwe-TV ukuze aziphumulele, ngakho-ke “okugxile kubantu” ukwakhiwa kwendawo yokuhlala. Ingqikithi yaphakade, ngakho-ke igumbi lokuphumula lihlukile kunokwakheka kwendabuko kwesethi "usofa + wethebula lekhofi + okwasemuva kwe-TV". Igumbi lokuphumula nokutadisha kuyizindawo ezimbili ezisebenzayo endaweni eyodwa, isikhala esizimele nesincikene ukuhlangabezana nendawo yokusebenza yesifundo sehhovisi nendawo yegumbi lokuhlala ukuze ubheke ubuhle obubonakalayo bobudlelwano, ukuthi ungahlanganisa kanjani ukwakheka kwanamuhla nendawo ebonakalayo ukugxila yokwakheka kwaleli cala. Ngesikhathi kwenziwa lo mklamo, uMnu. Zhou uthe ngokungagunci ukuthi indlu entsha kufanele yaneliswe ngokwanele ukuthi i-Still ikwazi ukungena. Ngemuva kokulungiswa kwayo, le ntokazi yawuthanda umphumela wokugcina, kanti noMnu Zhou wazwakalisa ukubonga kwakhe kumklami ngemuva kokungena. unyaka, sihloniphekile ukubamba iqhaza kumklamo wokuhlobisa ikhaya lakho elisha, futhi sabona uthando lwakho olumnandi nolumnandi, Uthando kuze kube phakade.
Isikhala esilula nesimsulwa ngaphandle komhlobiso omningi kungenza abantu behlise umoya futhi bajabulele ukunethezeka nokuthula kwekhaya. Umbala omkhulu wombala omnyama, omhlophe nampunga uhlanzekile futhi uhlanzekile, futhi indawo enkulu emhlophe inika isikhala inkululeko nokuzimela, kuyilapho umbala wokhuni ungezwa ukukhulisa ukushisa kwesikhala. Ukwakhiwa kwesibani esingenasisekelo sekuyinto ejwayelekile, ngokushintsha kwezikhathi, isidingo se-TV siya ngokuya siba buthakathaka, okwasemuva kwe-TV akuseyona into edingekayo kuyo yonke imindeni.
Isifundo siyiswa egumbini lokuphumula ukuze sikhulise ukuhlangabezana nezidingo zempilo yomninikhaya, okwenziwe kumuntu uqobo kuyisisekelo sokwenza ngokwezifiso komuntu, kuthuthukisa kakhulu ukusetshenziswa kwesikhala. Ngasikhathi sinye, uphahla lubekelwe amakhethini wokuqagela, ukuze kuthi ngemuva komsebenzi omatasa nokutadisha okunzima, ubuke umdlalo webhola noma i-movie, ukuze umzimba nengqondo yakho zikhululeke kahle.
Igumbi lokuphumula nokutadisha kuyizindawo ezimbili ezisebenzayo ezihlanganisiwe zaba yindawo eyodwa, ezimele futhi encikene, kokubili ukwakhiwa kwanamuhla nokusebenza kwesikhala. Usimende odumbile osimende opende odongeni, onikeza abantu isimo sezimboni sesimanje sokulula, nezocansi, kanye nokuthungwa okufudumele kokhuni okuxutshwe nenduduzo emhlophe emhlophe ehlanzekile, ukudala umphumela olula wokubuka wokuqonda okuthuthukile.
Umumo wedeski omiswe njengo-L ulula futhi ubushelelezi, okubukwayo kunwetshiwe, kepha futhi ukunciphisa ubumbano lwedeski le-monogram kanye nokuhlanganiswa. Ubuhle bemvelo bamashalofu anombala wokhuni laminate bukhombisa isifiso somnikazi sempilo engavinjelwe, isilinganiso segolide esingu-1: 1: 1.62 sehlukanisa senza isakhiwo esiqondile nesilula sibe sihle futhi siqondise. Ukwengezwa kolayini abamnyama bensimbi engagqwali kuqonde ukujula kwesikhala, kweqa ukuqina nokuqina kwesikhala ngendlela elula kakhulu.
Okuluhlaza okotshani okumnyama kuyintandokazi yomphathi wosizi, futhi unethemba lokukufaka ekwakhiweni kwendlu entsha ngaphandle kokuyihlula ngamandla. Ukuhlangabezana nezidingo zabahlali nokubanika umuzwa wokuthi bangababo, bese ulandela ukwethulwa kwesikhala, kuyisisekelo somklamo. Ukugxuma kokuluhlaza okotshani okumnyama kwenza ithoni yenkuni emnyama yonke, emhlophe nampunga ibukeke inempilo futhi inamandla, futhi iqhubeka nekhwalithi ethulile nengaphansi kwesikhala. Amashalofu anemibala yokhuni axhunywe odongeni ngakolunye uhlangothi, kanti olunye uhlangothi lufakwa esibukweni sokuhlobisa kusetshenziswa inqubo egxilile ekwakhiweni kwezakhiwo. Ukwengezwa kwesibuko sokumodela kusuka ku-façade kuqede ukuhlukaniswa kwezindawo ezimbili ezihlukile zokusebenza, ubuciko bokubonisa izibuko ukudala ukukhohlisa, kepha futhi kunwebe ububanzi bokubukwa kwesikhala, kuthuthukise ukujula kwenkundla.
Phakathi kwekamelo lokulala lesibili kanye nephaseji, izindawo ezimbili zokusebenza ezihlukene zehlukaniswe ngendlela yokuhlukaniswa kwengilazi engenasisekelo. Ukungena kwengilazi kukhulisa kakhulu ukukhanya kwemvelo endaweni yephaseji, kwandise ngempumelelo indawo yokubuka ukuthi ivuleke kakhulu. Ubuntofontofo bokhuni buyekisa ukuphola komhlophe ukudala ubuntofontofo nokufudumala, futhi nenhlanzeko enkulu yendawo iyakhuthaza. Ikhabethe lesitoreji eligcwele ngokweqile kunciphisa ukuminyana kwesikhala, futhi ukwengezwa komklamo wemabula phansi kwandisa ukugcwala nokukhanya kwesikhala. Umklamo weshalofu ovulekile ohlangothini lwekhabethe yokugcina ubeka esikhundleni setafula eliseceleni kombhede futhi ungabeka imihlobiso ethile noma izincwadi zesikhathi sokulala, zombili zihle futhi ziyasebenza.
Umthelela obonakalayo wombala oluhlaza okomnyama wendlu yokugqoka yezingubo uqinisa umuzwa wesiko lapho ungena endlini. I-laminate yokhuni kanye nohlaka lokusekelwa lwensimbi engagqwali lubonisa umuzwa oqondile, ukubona ukushayisana okubucayi nokubi, okufushane nokuphana ukudala umqondo ophakeme wesikhala, othembekile emsebenzini obalulekile wesikhala ukuhlangabezana nokusebenza kwengubo yokungena kanye nokugcinwa kwezicathulo. Itafula lezemabula elimhlophe le-jazz lisetshenziselwa ukubeka izikhwama, okhiye, njll., Ngesizinda esithambile se-veneer yokhuni, imigqa eqinile ikhombisa amandla ayo futhi inciphise ukufudumala kwezinkuni. Umnyango oshibilikayo wegumbi lokugqoka usebenzisa inhlanganisela yengilazi yothingo nengilazi yesibuko ngendlela yomnyango oshibilikayo nesibuko sokugqoka, ukukhishwa kwesibuko nokwelula isikhala, kubulala izinyoni ezintathu ngetshe elilodwa.
Isikhala sasekhishini sisalokhu sinombala ompunga omnyama nomhlophe ongapheli, ukwakheka okujwayelekile kwekhabethe elimise okwakwa-L elinokwahlukanisa okusebenzayo futhi okunengqondo, umshini wokuwasha izitsha owakhelwe ngaphakathi nekhabethe njengelinye, lihle futhi liyasebenza futhi lithuthukisa izinga lempilo.
Indawo yokulala elula nenokuthula ingavumela abantu ukuthi bajabulele ukuthula nokuzola kude nomsindo, futhi bachaze impilo yokuzilibazisa echumayo nethule ngaphakathi. Ithoni yokhuni olimpunga ikhombisa ubuhle obulula bokunganaki kwemvelo, okwenza kube nendawo kupholile futhi kufudumele. Faka udonga ngaphandle kokuklanywa kwekhanda lombhede we-backrest, ngephakheji elilula elinamapulangwe odonga lwezinkuni njengemuva, isikhala sibukeka sihlanzekile nekhwalithi. Osayizi abahlukahlukene besilinganiso sokwehlukanisa ukwakha umhlobiso olula futhi onamandla womugqa, ubuciko bezokuxhumana ezibukwayo bubonisa umqondo wokuklama wokucubungula imininingwane. Itafula elengayo lombhede elenziwe esizeni futhi elifakwe ekhabethe ligcina ishelufu lesiboniso esivulekile nomsebenzi wokugcina wetafula eliseceleni kombhede, kuthuthukisa umqondo wokwakheka nokuklanywa kwesikhala, kukhombisa ukwehluka nokuguquguquka komklamo.
Ngakolunye uhlangothi lwekhanda lombhede, ukuma kokhuni lokwakhiwa kokhuni ukucubungula okumise okwe-L, ukuma kwesikhala okugoqiwe kunika abantu umuzwa wokuphepha. I-chandelier eqondile eqondile ilula ukujula kwesikhala, okwenza ukuphakama kwangaphakathi kubonakale kuphakeme. Impilo ekahle yokukhanya, ngokushintsha kwelanga, ilanga ngokuhamba ngengilazi enkulu ngaphakathi ukuze linikeze ukukhanya okuphelele, ngumoya omncane omnene, imizwa yinhle kakhulu.
Umbala ompunga omnyama nomhlophe ojwayelekile uzoba yindawo yokugezela yomqondo othuthukile wesethulo ngokucacile, ibheshi eligcwele kanye nolayini wodonga lwendlu yangasese kunciphisa ukwakheka kwamakhona ezempilo alula ukunakekelwa. Kuyindlela engcono yokusebenzisa kahle isikhala, futhi kuyindlela engcono yokusebenzisa kahle isikhala.
▲ Isakhiwo Sangempela
Uhlobo lwendlu yokuqala enamakamelo okulala amabili, izindlu zangasese ezimbili bezihlanzekile futhi ziqoqekile, kanti amakamelo okulala amabili agcinwe ngokuya ngesidingo somnikazi kodwa ahluleka ukusebenza. Ngaphansi kwesimo sokuqinisekisa isidingo esiyisisekelo, umklami wenze ukulungisa okuthile enhlotsheni yendlu:
1. udonga phakathi kwegumbi lokudlela negumbi lokugezela lwashintshelwa kwesokunxele ngamasentimitha angama-60, futhi ukwakhiwa kwekhishi lasentshonalanga kwenziwa ukukhulisa ukugcinwa kwegumbi lokudlela;
2. ingxenye yesikhala ikhishwe endlini yangasese yegumbi lokudlela, futhi ipulatifomu yemishini yafakwa egumbini lokugezela ukukhulisa ukwakheka kwendawo yokugeza;
3. udonga lwasemuva lwe-TV lwashiywa futhi isifundo sayiswa egumbini lokuphumula, futhi ngasikhathi sinye, uphahla lwalugcinelwe isifundo.
4. Udonga oluphakathi kwekamelo lokulala lesibili kanye nephaseji luhlukaniswe ngengilazi engenafreyimu ukukhulisa ukukhanya kwemvelo ephaseji.
IHuizhu Space Design iyi-ejensi yezinsizakalo ezihlinzeka ngemiklamo yangaphakathi, ukwakhiwa kokwakhiwa nokunikezwa okuthambile kwendawo yokuhlala esezingeni eliphakeme. Kusukela yasungulwa, iqembu eliyinhloko belilokhu lilandela umqondo wokuklama we "aesthetics / home functional", ubuntu obuhunyushiwe kanye nezinto ezithandayo ngokucophelela okukhulu, kwagcizelelwa ekuhlanganisweni okuphelele kokuklanywa kokusebenza kokuthokozela impilo, futhi basebenzisa ulimi lobuciko kanye nezindlela zokuveza izakhiwo, kufaka phakathi isikhala, ukukhanya, ubukhulu, umbala, njll., ukwakha ngokubambisana izikhala zangaphakathi lapho kutholakala khona ukunethezeka nokunambitheka. Isitudiyo sithola inani elilinganiselwe lama-oda ngenyanga, sicela wenze i-aphoyintimenti ngaphambi kwesikhathi.
I-2019 Jintang Award China Interior Design Imisebenzi Evelele Yonyaka
I-2019 China Private Residence Design Amadolobha Asezingeni Lonyaka iNanjing Top 10
I-2019 China Private Residence Design Ngonyaka eyi-100 Ama-Agency Design Residence Private Residence
Ama-2019 Builders Awards East China Sub-region Inkazimulo Yonyaka
Imiklomelo ye-2019 Mango Award China Humanities Design Competition Finalist Award
I-2019-2020 Shanghai International Design Week Rising Star China Design Award
Isibonelo se-2019-2020 se-Extreme Home Interior Design (Living)
Umncintiswano we-2018 China Better Living Space Design TOP 100
Ama-2018 Builders Awards Mid-Home Design of the Year Award
Edlule :: Isikhala Nguye Ophakeme Ubuhle Bobu Minimalism Olandelayo: I-Senior Grey, i-Avocado Green ne-Champagne Pink, Isikhala Sothando Lapho i-Retro And Coexist Yesimanje